एसईओ एजेन्सीको साथ प्रभावी सहयोगका लागि १० Semalt नियमहरू: यसको गतिविधिहरू कसरी समर्थन गर्ने?
खोज इञ्जिन अप्टिमाइजेसनले विक्रय प्राप्त गर्ने सम्भावनामा ठूलो वृद्धि गर्दछ, तर यो ग्यारेन्टी होईन। यो जान्न लायक छ कि यो केवल गुगल र एजेन्सीको कार्य मा परिवर्तन हो कि स्थिति को प्रभावकारिता निर्धारित। स्थितिसँग सम्बन्धित धेरै महत्वपूर्ण मुद्दाहरू तपाइँमा पनि निर्भर गर्दछ। कसरी तपाईं, ग्राहकको रूपमा, गुगलमा तपाईंको वेबसाइट स्थितिको प्रभावकारितालाई प्रभाव पार्न सक्नुहुन्छ?
स्थितिलाई असर गर्ने कारकहरू के हुन्?
जब तपाइँको वेबसाइट शीर्ष १० Google खोज परिणामहरूमा चयन गरिएका वाक्यांशहरूको लागि दृश्यमान छ, धन्यवाद स्थिति स्थितिमा हुनु आवश्यक छ। तर किन तपाइँको वेबसाइट र कुनै अन्य छैन? यो निर्धारण गर्ने कारकहरू, भनिन्छ क्रमबद्ध कारक गतिविधिहरूको योजना बनाउँदा एजेन्सीले यसलाई ध्यानमा राख्छ। एक एजेन्सी द्वारा तयार राम्रो स्थिति रणनीति तपाइँको वेबसाइट को सफलता को एक ठूलो हिस्सा हो।
यद्यपि सबै भन्दा राम्रो एजेन्सीले पनि परिणाम ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन। गुगल द्वारा एल्गोरिथ्मको निरन्तर सुधार पनि ठूलो महत्त्वको छ। के ले भर्खरको साइटलाई शीर्ष १० मा बनाएको छ, आज काम नगर्न सक्छ वा साईटको दृश्यता कम गर्दछ। त्यसैले तपाईंको एजेन्सीको प्रयास अप्रत्याशित रूपमा backfire गर्न सक्छन्। यो निस्सन्देह, एक चरम उदाहरण हो, तर हामीमध्ये कसैले पनि गुगलको कार्य र निर्णयहरूमा कुनै प्रभाव पार्दैन।
जे होस्, त्यहाँ एक अर्को महत्त्वपूर्ण क्षेत्र छ जुन एसईओ प्रभावकारिता लाई प्रभावित गर्दछ - यो तपाईंको मनोवृत्ति हो र एजेन्सीको साथ सहयोगको गुणवत्ता हो। तपाईं के गर्न सक्नुहुन्छ र गल्तीहरू के हुन्, तपाईं बेवास्ता गर्न सक्नुहुनेछ? सबैभन्दा सामान्य कारणहरू हेर्नुहोस् जुन पोजिशनिंगमा प्रभावहरूको उपलब्धिलाई ढिलो गर्दछ, र त्यो तपाईंमा निर्भर हुन्छ।
१. एसईओ संक्षिप्त चरणमा लापरवाह
एक एसईओ एजेन्सी स्थिति को बारे मा थाहा छ, तर यो तपाइँको व्यवसाय, उद्योग जहाँ तपाइँ संचालन र तपाइँको ग्राहकहरु को बारे मा धेरै थाहा छैन। तसर्थ, यसको ज्ञान तपाइँबाट लिइएको संक्षिप्त प्रतिक्रियाहरूमा आधारित हुनुपर्दछ।
यस चरणमा यो पहिले नै भएको छ कि ग्राहकसँग समय छैन र केवल सामान्य, ल्याकोनिक उत्तरहरू दिन्छ। सबै पछि, एजेन्सी स्थिति छ, तपाइँ को लागी एक नयाँ व्यापार योजना बनाउनु छैन, सही? अरु केहि गलत हुन सक्दैन। वाक्यांशहरू छनौट गर्दै, कार्यहरूको अनुक्रम योजना गर्दै, लि acqu्कहरू प्राप्त गर्दै - यी सबै गतिविधिहरू तपाईंको व्यावसाय रणनीति अनुरूप हुनुपर्दछ।
यहाँ, समय बचत मात्र स्पष्ट छन्। तर आज, तपाईंले आफ्नो कम्पनीको बारेमा एसईओ एजेन्सीहरूलाई सही जानकारी दिनु आवश्यक छ; अन्यथा र केहि महिनामा तपाईं वेबसाइटमा सुधारमा डुब्नुहुनेछ जुन अपर्याप्त वाक्यांशहरूको परिणामस्वरूप, तपाईंको ग्राहकहरूको लागि एक बुझ्न नमिल्ने शैली र उत्पादनहरू जुन तपाईं जे भए पनि फिर्ता लिन योजना गरिरहनुभएको थियो।
२. स्थिति परिवर्तनका लागि वेबसाइट परिवर्तनको कार्यान्वयनको स्थगन
एसईओ एजेन्सीको सहयोगको सुरूमा एक प्रारम्भिक अडिटले तपाईंको वेबसाइटमा धेरै त्रुटिहरू र त्रुटिहरू प्रकट गर्न सक्दछ। यो स्थिति र कार्यक्षमता को लागी वेबसाइट को अनुकूलन दुबै चिन्ता गर्न सक्छ कि महत्वपूर्ण बिक्री लाई असर गर्छ।
सामान्यतया, सहयोगको पहिलो महिनामा, तपाइँको वेबसाइटको सबै कमजोरीहरू जसले पोजीशनिंग प्रभावको विकासमा हस्तक्षेप गर्न सक्दछन्। तपाइँ एजेन्सीबाट सिफारिश गरिएको पृष्ठ परिवर्तनहरूको लामो सूची प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाइँको साइट प्रशासकले बनाउनु पर्छ। यो कार्य भारी र समय खपत हुने हुन सक्छ, तर यो आवश्यक छ। त्यसैले सिफारिसहरू लागू गर्न नहिचकिचाउनुहोस् Semalt जस्ता SEO एजेन्सीहरूबाट। याद गर्नुहोस् कि एजेन्सीले आज अपरेटिंग सुरू गर्न सक्दछ, तर यी कार्यहरू प्रभावी हुने छैनन् यदि वेबसाइटमा गम्भीर कमजोरीहरू छन्
के तपाई एजेन्सी खोज्दै हुनुहुन्छ जुन काम गर्न सहज छ?
हामी तपाईंलाई के प्रस्ताव गर्दछौं हेर्नुहोस्
The. एसईओ एजेन्सी र ग्राहक बीचमा सञ्चार समस्या
यो पोइन्ट वास्तवमा एजेन्सी र ग्राहकलाई समान रूपमा लागू हुन्छ। दक्ष संचार आवश्यक छ। एजेन्सी यसको गतिविधिहरु को बारे मा स्पष्ट र बुझ्नु पर्छ र केहि प्रश्नहरु सोध्नुहोला कि के हुँदैछ तपाइँलाई थाहा छ के हुँदैछ, तपाई इन्टरनेट मार्केटिंग संग अपरिचित भए पनि। अन्तमा, एजेन्सीले सञ्चारको निरन्तरताको ख्याल राख्नुपर्दछ, ईमेलहरूको दक्षतासाथ जवाफ दिनुहोस्, तपाईंलाई रसिदको साथ फिर्ता पठाउँदैन जब तपाईं प्रश्नहरूसँग कल गर्नुहुन्छ र तपाईंसँग समय छ।
ग्राहक पक्षमा सञ्चार कस्तो देखिन्छ? एजेन्सीलाई प्राय: विभिन्न गतिविधि वा साना जानकारीको लागि तपाईंको स्वीकृति आवश्यक पर्दछ, एजेन्सीले यसलाई छिटो प्राप्त गरेको निश्चित गर्नुहोस्। अन्यथा, तपाइँ स्थितिहरू को कार्यहरूको ढिलाइ गर्नुहुन्छ। यदि तपाईंसँग SEO विशेषज्ञ वा कपीराइटरहरूको कामको बारेमा टिप्पणीहरू छन् भने, यो असन्तुष्टि व्यक्त गर्न पर्याप्त छैन।
कुनै पनि चीज सुधार गर्नका लागि हामीलाई रचनात्मक आलोचना चाहिन्छ, जुन तपाईंलाई के उपयुक्त छैन र किन किन नहोस् त्यसको एक विशिष्ट स .्केत हो। त्यसोभए मात्र एजेन्सीले यसको अपरेशन परिवर्तन गर्न सक्दछ र तपाईको अपेक्षाहरू अनुरुप केही तत्वहरू लागू गर्न सक्दछ, यदि होईन भने यो अझै पनि एसईओ सिद्धान्तहरू अनुरूप हुनेछ।
Technical. प्राविधिक र मार्केटिंग शीर्षकहरूमा अनिच्छा
यो तपाईं होइन, जो वेबसाइट अवस्थित गर्दछ, त्यसोभए तपाईंलाई स्थितिको बारेमा ज्ञान किन चाहिन्छ? यो काम आउँछ। तपाईं विशिष्ट गतिविधिहरूको लागि भुक्तान गर्नुहुन्छ, त्यसैले कम से कम एसईओ रिपोर्टहरू बुझ्नको लागि केही आधारभूत ज्ञान हुनु उचित हो। स्थितिको आधारभूत ज्ञानले तपाईंलाई इन्टरनेट मार्केटि inमा लगानीमा यथार्थपरित दृष्टिकोण लिन पनि अनुमति दिनेछ।
तपाईं अत्यधिक र अवास्तविक अपेक्षाहरू सम्बन्धित निराशाबाट बच्नुहुनेछ। तपाइँले के अपेक्षा गर्ने जान्नु हुन्छ र पहिलो परिणामहरूको लागि कति लामो समय कुर्नुपर्दछ। एजेन्सीले तपाईलाई यी सबैको बारेमा जानकारी दिनुपर्दछ, तर यस्तो हुन्छ कि उद्यमीहरू प्राविधिक र मार्केटिंग शीर्षकहरूमा यत्तिको हिचकिचाउँदछन् कि उनीहरू पोजीसन कसरी भइरहेको छ भन्ने बारे सुन्न चाहँदैनन्।
यो एजेन्सीलाई ग्राहकहरूसँग काम गर्न मनपराउँदैन जसलाई केहि पनि थाहा छैन। यसको विपरित, एक शिक्षित ग्राहक कार्यमा सचेत साझेदार हो। यसैले यो महत्त्वपूर्ण छ कि ग्राहकसँग इन्टर्नेट मार्केटिंगको आधारभूत ज्ञान छ। हामी यो भन्छौं किनकि हामी सबैले बुझ्छौं कि हामी के गर्छौं र किन।
SEO. SEO मा अनुपयुक्त प्राथमिकता
एजेन्सी तपाईं बाट संक्षिप्त र वर्तमान जानकारीमा आधारित गतिविधिहरू संचालन गर्नेछ। याद गर्नुहोस् कि SEO ले समय लिन्छ। त्यसैले लामो अवधिमा प्राथमिकता दिनुहोस्। यदि यो मे र तपाइँ जूनमा बिक्री अभियान सञ्चालन गर्न चाहनुहुन्छ भने, स्थिति काम गर्दैन।
गुगल विज्ञापन वा फेसबुक विज्ञापनहरू प्रयोग गरेर छोटो मार्केटि campaigns अभियानहरू गर्नु यो उत्तम हो। यदि, अर्कोतर्फ, तपाईसँग अर्को बर्षमा बिक्री बढाउने र विशिष्ट प्रस्ताव तत्वहरू छान्ने लक्ष्य छ, र यो स्थितिकर्ताहरूको लागि यथार्थपरक लक्ष्य हो। पोजिशनिंगमा प्राथमिकता दिन अरु के लायक छ? एक प्रभावकारी रणनीति भनेको पहिले नै ठूलो माग भएका उत्पादन र सेवाहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नु हो। यसका लागि धन्यवाद, तपाइँ प्रभावहरू छिटो देख्नुहुनेछ, र दोस्रो स्थानमा तपाइँ समस्याग्रस्त, प्रस्तावको आला तत्वहरूमा काम गर्नुहुनेछ।
यो नबिर्सनुहोस् कि हाम्रो गतिविधिहरूको मुख्य लक्ष्य तपाईंको लागि नाफा कमाउनु हो। अज्ञात उत्पादन वा नयाँ ब्रान्डको छवि को लोकप्रियता निर्माण एक साईड इफेक्ट मात्र हो, र हाम्रो विचारमा, यो स्थितिले कार्य गर्दछ।
SEO. SEO copywriting - पाठ स्वीकृति
स्थिति मा एक महत्वपूर्ण गतिविधि सही वाक्यांशहरु संग, तपाइँको वेबसाइट को लागी अनुकूलित र समृद्ध सामग्री बनाउनु हो।
अरू कसैको पदहरूको वस्तुनिष्ठ आकलन गर्न गाह्रो छ। एक व्यक्तिलाई के मनपर्दछ, अर्कोले मनपर्दैन। वेबसाइटमा प्रकाशित गर्नु अघि तपाईले सामयिक स्वीकृतिका लागि नयाँ पाठहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ। यो महत्त्वपूर्ण छ कि पाठ खारेज गर्नुको सट्टा यसमा टिप्पणीहरू थप्नुहोस् र अनुरूप हाइलाइट गर्नुहोस् जुन तपाईंलाई उपयुक्त छैन। ती टिप्पणीहरूबाट, एसईओ प्रतिलिपि लेखकले उचित सुधार गर्न सक्षम हुनेछन्।
अन्तमा, तपाईंको अनुमोदनको लागि पर्खने समय पनि महत्त्वपूर्ण छ। पाठको स्वीकृति ढिलाइ नगर्नुहोस्। सम्झनुहोस् कि ती चाँडै पृष्ठमा पुग्छन्, चाँडो उनीहरूले खोज परिणामहरूमा यसको स्थानहरूमा काम गर्दछन्। जब तपाइँ एसईओ को लागी भुक्तान गर्नुहुन्छ, तपाइँ एसईओ सामग्री को निर्माण को लागी भी भुक्तान गर्नुहुन्छ। जबसम्म कोहीले अनुमोदन प्राप्त गर्दैन र यसलाई प्रकाशित गर्दैन, तपाईं वास्तवमै तपाईंको पैसा बर्बाद गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसोभए पाठहरूको भाग्य केही हदसम्म तपाईंको हातमा छ।
7. वेबसाइटको लागि एसईओको महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरूमा सहमतिको अभाव
के तपाईं त्यस वेबसाइट मालिकहरू मध्ये एक हुनुहुन्छ जसले यसको डिजाइनमा धेरै लगानी गर्नुभयो र कुनै परिवर्तन हुन सक्छ भनेर कल्पना गर्न सक्नुहुन्न? तपाईं यस्तो साइटबाट अपेक्षित नाफा नमिल्ने जोखिम चलाउनुहुन्छ।
प्रत्येक राम्रो वेबसाइट कार्यशील छैन, बिक्रीको लागि अनुकूलित छ र एकै समयमा गुगलको लागि। वेबसाइट एक बिक्री उपकरण हो। अवश्य पनि, यो आकर्षक हुनुपर्दछ, तर प्रयोग गर्न सजिलो र गुगल खोजी परिणामहरूमा पनि देखिनेछ। पोजिशनिंगका लागि यो मुख्य रूपमा महत्त्वपूर्ण छ कि यसले वाक्यांश भएको पाठ समावेश गर्दछ र प्राविधिक रूपमा अनुकूलित छ। प्राविधिक अप्टिमाइजेसन प्रयोगकर्ताहरूलाई दृश्यात्मक छैन, त्यसैले यो ग्राहक प्रतिरोधसँग सम्बन्धित छैन। नयाँ पाठ फाँटहरू थप्न अनिच्छुक छ, तर यो कुरा बुझ्नु उपयुक्त छ कि त्यस्ता परिवर्तनहरू बिना वेबसाइट प्रतिस्पर्धाको स्थिति भन्दा पछाडि पछाडि पर्छ।
The. वेबसाईटमा लगानी गर्न इच्छुकताको अभाव
एजेन्सी उच्च स्तर मा तपाइँ को लागी SEO प्रदर्शन गर्न सक्दछ। जे होस्, स्थिति मुख्य रूपले भ्रमणको एक बृद्धि संख्या उत्पन्न गर्दछ। अब के हुन्छ? वेबसाइटमा प्राप्त प्रयोगकर्ताले आफूले खोजेको कुरा पत्ता लगाउनुपर्दछ, वेबसाइट मार्फत सजिलै नेभिगेट गर्नुहोस् र अन्तमा आकर्षक प्रस्ताव फेला पार्नुहोस्।
दृश्य पक्ष स्थितिमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नहुन सक्छ, तर यसले बिक्रीमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। सबै एसईओ एजेन्सीहरू यस स्थितिमा ध्यान दिन, तर सबै पछि यो बिक्री को बारे मा हो। यसका साथसाथै वेबसाईटमा ट्राफिक निर्माणको साथ, हामी यसको विश्लेषण गर्नेछौं कि यो ट्राफिकले बिक्री उत्पन्न गर्दछ वा के सम्भावित अवरोधहरूले यसलाई बेकारका बनाउँछन्।
हामी सजावट परिवर्तनको प्रस्ताव गर्न सक्छौं, मेनु पुन: निर्माणको सुझाव दिन सक्दछौं, समान स्टोरहरू र वेबसाइटहरू देखाउँदछौं, तर कम मूल्यहरू वा अन्य सुविधाहरूको साथ। उच्च पद पर्याप्त छैन, त्यसैले वेबसाइट सफल हुनको लागि तपाइँ यसको निरन्तर सुधार, प्रवृत्तिमा अनुकूलन र सबै भन्दा माथि, प्रयोगकर्ताहरूको आवश्यकतामा लगानी गर्न तयार हुनुपर्दछ।
अर्को पोइन्टहरू चिन्ता गल्तीहरू गर्दछ जुन तपाईंले अनजानमै गर्न सक्नुहुन्छ र यसैले एजेन्सीले अहिलेसम्म उत्पन्न गरेको सबै परिणामहरू रद्द गर्दछ। हामीले यस्ता परिस्थितिहरू आफैंसँग धेरै पटक सामना गरेका छौं। हाम्रो कामको महिनाहरू हराए, र ग्राहक निराश थिए कि अहिलेसम्मको लगानी बर्बाद भएको थियो। यस्तो अप्रिय परिस्थितिको कारण के हो?
The। एसईओ विशेषज्ञहरुसँग परामर्श नगरी वेबसाइटमा परिवर्तन गर्दै
तपाईं विश्वस्त हुन सक्नुहुन्छ कि एउटा पाठ वा यूआरएल परिवर्तन गर्नु ठूलो कुरा होइन। एक मामूली कस्मेटिक टच जुन कसैले पनि याद गर्दैन। जहाँसम्म, स्थिति को लागि, एक सानो परिवर्तन पनि एक क्रान्ति हुन सक्छ, यदि यो एक राम्रो स्थिति को उप-पेज चिन्तित छ कि धेरै यातायात को उत्पन्न।
पोजिशनिंग निकट सम्बन्धसँग सम्बन्धित छ जस्तै विशिष्ट URL ठेगाना र वाक्यांशहरूको साथ पृष्ठमा निर्दिष्ट सामग्री। यस सन्दर्भमा परिवर्तन एसईओ विशेषज्ञको परामर्शमा हुनु पर्छ जसले परिचय, पुनःनिर्देशन वा परिवर्तनको कुन क्षेत्र स्वीकार्य छ र वेबसाइटको स्थितिलाई खतरामा पार्दैन भन्न सक्ने छ।
१०. SEO लाई परामर्श नगरी सम्पूर्ण साइट परिवर्तन गर्दै
के तपाइँ तपाइँको डोमेन, तपाइँको ब्रान्ड वा तपाइँको कम्पनीको नाम परिवर्तन गर्ने योजना गर्दै हुनुहुन्छ? यो स्थितिमा रिपोर्ट गर्नुहोस् जसले कामको योजना यस्तो बनाउँदछ कि परिणामहरू नयाँ डोमेनमा हस्तान्तरण हुन सक्छ।
कामको क्रम यस्तो देखिनुपर्दछ: तपाईं नयाँ वेबसाइट लागू गर्नुहुन्छ, यसमा सामग्री सिर्जना गर्नुहोस्, तर पुरानो वेबसाइट अझै उपलब्ध छ। यसलाई ध्यानमा राख्दै, पोष्टररसँग रीडायरेक्टहरू कार्यान्वयन गर्न र प्राप्त परिणामहरू कायम राख्नको लागि अवसर हुन्छ।
यी सम्भवत सबै साधारण कठिनाइहरु हुन् जुन पोष्टर्स द्वारा सामना गर्नु परेको हो। तिनीहरू मध्ये धेरैले ज्ञानको अभाव र ग्राहकहरूको अज्ञानताका परिणामहरू हुन्, त्यसैले ग्राहकहरूसँग ज्ञान साझा गर्न र एक सम्पर्क व्यक्तिलाई प्रतिनिधित्व गर्न यो राम्रो लगानी हो जुन गतिविधिहरू सरल भाषामा कुराकानी गर्न सक्षम हुनेछ।
तपाईको वेबसाइटको दृश्यताaमा निर्भर गर्दछ एसईओ मा ठूलो हद, तर तपाईमले देख्न सक्नुहुने रूपमा, त्यहाँ पक्षहरू पनि छन् जुन तपाईंको पक्षमा रहन्छ। यो एजेन्सीको साथ काम गर्न केहि समय खर्च गर्न तयार हुनको लागि तयार छ र समर्थनको लागि खोल्न सकिन्छ, विशेष गरी तपाईंको कम्पनी, प्रस्ताव र ग्राहकहरूको बारेमा ज्ञानको सर्तमा।